Mampianatra anao izahay ny fomba fanapahana ny iPhone hametrahana fampiharana maimaim-poana | Vaovao IPhone
Mametraka (vaky) fampiharana amin'ny endrika .ipa
Raha lazaiko fa ny jailbreak Manolotra tontolo iray manontolo azo atao izy io, tsy mahita na inona na inona aho. Azontsika atao ny mandingana ny fameperana apetraky ny Apple ary mametraka fampiharana tena ilaina, na dia misy fitondran-tena mampiahiahy ihany koa aza. Ary, miresaka momba izay tsara na ratsy, dia afaka manao izany koa isika mametraka apps vaky tsy mandoa denaria tokana.
Raha ny fahitako azy dia piraty tsy mahazo tombony na iza na iza. Amin'ny mozika, rindrambaiko sy zavatra hafa mitovy amin'izany, raha piraty isika rehetra dia hanao mpamorona / mpanakanto tsy afaka mitady fivelomana amin'izay tiantsika, ka hijanona tsy hanao izany izy ireo ary tsy ho afaka hankafy azy io. Afaka manao izay inoany ny olon-drehetra, saingy hitako izany. Etsy ankilany, ny fahaizana mitsapa zavatra alohan'ny handoavana izany dia mety ho hevitra tsara ihany koa. Izany dia nilaza fa hasehonay anao ny fomba fametrahana rakitra .ipa triatra amin'ny iPhone, iPod na iPad anao.
1 Ahoana ny fametrahana apps piraty amin'ny iPhone
1.1 Miaraka amin'ny rindrambaiko iPhone
1.2 Miaraka amin'ny iTunes
2 Very ve ny fiantohana rehefa voajirika ny iPhone?
3 Inona no loza mety hitranga raha mandika ny iPhone aho?
4 Afaka manavao ireo rindrambaiko iPhone piraty ve aho?
Ahoana ny fametrahana apps piraty amin'ny iPhone
Ny zavatra voalohany tokony hataonao dia mametaka tweaks Cydia izay ho hitanao ao amin'ireo trano fivarotana tsy ofisialy (Manoro hevitra ny repo.hackyouriphone.org aho). Momba izany AppSync ary, arakaraka ny fotoana hametrahanao azy sy avy aiza no hitahirizanao azy, dia hahita kinova iray na hafa ianao. AppSync 9+, AppSync Unified na izay tehirizin'ny repository safidinao hiantso azy dia tokony ho efa misy izao. Vantany vao apetraka dia hanana safidy roa isika:
Miaraka amin'ny rindrambaiko iPhone
Ity fomba ity dia tsy ny tsotra indrindra, fa io no mahasoa indrindra ho an'ny ankamaroan'ny mpampiasa satria afaka manao ny zava-drehetra avy amin'ny iPhone izy io.
Ity dia iray amin'ireo fampiharana voalohany alternatives to install0us efa nisy hatramin'ny mbola tsy nanjavona ilay fampiharana malaza hisintona sy hametraka rindrambaiko piraty. Raha hametraka azy io dia mandehana fotsiny amin'ny http://www.vshare.com miaraka amin'ny iPhone Safari ary safidio ny kisary paoma.
AppSync dia hamela anao hametraka ny rindranasa avy amin'ilay mpitety tranonkala ihany. Raha vao apetraka dia tsy maintsy karohy ny fampiharana tadiavina ary ampidino izany. Mety mahita rohy ianao, amin'izay ianao dia tokony hisafidy iray ary manomboka misintona hametraka azy avy eo.
AppCake: efa antitra be koa ity rindranasa ity ary izay indrindra no mahatonga azy io azo antoka. Raha hametraka AppCake dia handeha amin'ny tranonkala isika https://www.iphonecake.com ary ny ambiny dia mitovy amin'ny vShare.
Betsaka ny rindranasa hafa, fa ireto roa ireto no hatolotro anao. AppAddict, izay ny fampiharana izay nadikako tamin'ny teny Espaniôla tamin'ny androny, dia manana olana anatiny amin'ireo mpamorona azy ka tsy afaka manome soso-kevitra izany. Raha ny marina, raha tsy diso aho dia nanjavona ihany koa izy ireo, nanatsahatra ny sasany amin'ireo singa ao aminy ao amin'ny AppCake.
Miaraka amin'ny iTunes
Ity no tsotra indrindra ary atolotra indrindra. Ireo tranokala vShare sy AppCake dia mamela antsika hisintona ny fisie .ipa amin'ny solosaintsika ihany koa. Raha vantany vao alaina ny rakitra .ipa dia mila manao fotsiny isika tsindrio roa momba izany mba hahafahantsika maka tahaka azy amin'ny iTunes. Raha vantany vao ao amin'ny iTunes dia tsy maintsy ampifanarahina amin'ny iPhone, iPod na iPad fotsiny isika ary apetrak'i iTunes ho antsika izany. Tsy misy intsony.
Raha tsy te hifandray amin'ny iTunes ianao dia misy safidy hafa koa, dia ny fampidinana ny .ipa amin'ny solosainao ary alefaso any amin'ny iPhone amin'ny alàlan iFile hanokatra azy amin'ny vShare na AppCake. Mety ho hevitra tsara izany raha ny Mavesatra ny rakitra izay tianay sintonina, satria mety maharitra fotoana maharitra ny fisintomana miaraka amin'ireo rindranasa.
Very ve ny fiantohana rehefa voajirika ny iPhone?
Ity fanontaniana ity dia tsy manana valiny mazava. Tokony hatao tsy ho very antoka isika rehefa manenjika ny iPhone. Milaza aho fa "heverina ho" satria Apple dia mety hametraka olana amin'ny fanamboarana iPhone raha toa ka nopotehintsika izy io, saingy tsy azo inoana izany. Ny fantatra amin'ny anarana hoe "hacking" iPhone dia ny fampidirana am-ponja azy, izay misy ny fanovana ny rindrambaiko ahafahany manao zavatra izay tsy avelan'ny fitaovana miaraka amin'ny rafi-pandaminana mahazatra.
Fa andao handeha amin'ny ampahany: nanazava ny inona ny jailbreakNy ankamaroan'ny firenena, toa an'i Etazonia, misy ny foiben'i Apple, dia milaza fa ara-dalàna ny fanitsakitsahana ny tranomaizina. Raha manapa-kevitra ny hanao izany amin'ny iPhone, iPod Touch na iPad isika dia tsy ho very ny fiantohana ny fitaovana.
Etsy ankilany, raha manenjika jailbreak fitaovana iOS dia tsy maintsy ataontsika izay fantatra amin'ny hoe "flashing". Na dia tsy dia azo inoana loatra aza izany, araka ny hazavainay etsy ambany, azontsika atao ny tsy manomboka ny iPhone ary tsy hihoatra ny sakana, fa afaka mitondra azy hatrany amin'i Apple isika ary milaza aminy izay nanjo antsika tamin'ny fanaovana karazana karazana hafa mifandrambondrambona: fanavaozana ny rafitra fiasa amin'ny fomba mahazatra, na amin'ny iTunes na amin'ny alàlan'ny OTA (Over The Air).
Inona no loza mety hitranga raha mandika ny iPhone aho?
Araka ny efa nohazavainay tamin'ny teboka teo aloha, ny fanapahana ny iPhone dia antsoina hoe jailbreak. Amin'ny alàlan'ny famakiana tranomaizina fitaovana iOS azontsika Fandraisana fidirana Super-mpampiasa (fantatra koa amin'ny hoe Root), izay ahafahantsika manamboatra fanovana izay tsy avelan'i Apple hataontsika default. Hatreto dia milamina ny zava-drehetra. Ny olana dia tsy hanokatra varavarana hahafahantsika manova ny tenantsika fotsiny isika, fa hanokatra varavarana ahafahan'ny olon-kafa miditra.
Inona no mitranga avy eo? Eny, satria manana fahalalahana bebe kokoa isika, afaka mametraka rindranasa miovaova na miovaova isika avy amina mpampiasa manimba ary mametraka kaody ratsy miaraka amin'izy ireo izay mangalatra ny mombamomba anay. Tsy dia fahita izany, fa tena mety.
Etsy ankilany, araka ny nolazaiko teo amin'ny teboka teo aloha, ny tselatra rehetra dia mety hiteraka olana. Ny tahan'ny tsy fahombiazana dia saika tsy misy (raha ny marina dia tsy fantatro izay tranga rehetra), saingy tsy maintsy maneho hevitra momba izany isika raha azo atao. Raha apetrakay ny jailbreak ary tsy afaka manomboka indray izy, araka ny efa nolazaiko ihany koa, azontsika atao ny mitondra izany any amin'ny Apple Store ary milaza fa nitranga tamintsika izany hoe manandrana manavao ny endrika iOS ambony kokoa amin'ny iTunes na amin'ny OTA. Ahoana anefa raha tsy manana isika Apple Store na fananganana alalana eo akaiky eo? Angamba amin'ireo tranga ireo dia tsara kokoa ny mamela ny toe-javatra misy azy ireo.
Afaka manavao ireo rindrambaiko iPhone piraty ve aho?
Eny, nefa lojika tsy avy amin'ny App Store. Raha hanavao ny rindranasa iray izay tsy novidianay dia tsy maintsy ataontsika izany amin'ny alàlan'ny fampidinana .ipa vaovao an'io rindranasa io ary apetaka eo ambonin'ilay efa ananantsika. Raha mampiasa fampiharana toa ny AppCake isika dia ataovy izay nataontsika tamin'ny fisintomana azy voalohany: tadiavo io, tadiavo ny kinova vaovao, ampidino ary apetraho.
Azontsika atao koa ny manavao fampiharana iray fampidinana ny .ipa vaovao amin'ny solosaintsika, amin'ny alàlan'ny fanindriana indroa ao aminy sy fampifanarahana amin'ny iTunes.
Araka ny nolazaiko tetsy ambony, piraty tsy mahazo tombony na iza na iza, ka mila manao a fampiasana tompon'andraikitra ny vaovao ao amin'ity lesona kely ity, toy ny fitsapana fampiharana iray hahazoana antoka fa mifanaraka amin'ny zavatra antenaintsika alohan'ny handoavana zavatra tsy fantatsika na tiantsika na tsia isika. Ny zavatra lojika indrindra dia ny fandoavana ny rindranasa tiantsika, satria avelantsika hanohy hanatsara azy ny mpamorona. Raha tsy izany, ary raha nanao toy izany isika rehetra, dia hiafara amin'ny fampiasana kinova 1.0 isaky ny fampiharana ary tsy hahita fanavaozana lehibe toa an'i Tweetbot 4 na Reeder 3. Miombon-kevitra amiko ve ianao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Mametraka (vaky) fampiharana amin'ny endrika .ipa
Ela sy maharitra izany hahaha. Izaho dia iray amin'ireo nametraka rindranasa tao amin'ny IPA efa ela satria tena ahazoana aina xD. Raha tsy voatery hametraka ny APP amin'ny alàlan'ny SSH foana isika dia tsara lavitra in-arivo ny IPA. XD
Raha misy tsy mahalala azy dia ataovy izany tsy isalasalana.
PS: - Ao amin'ny Installer dia manana iray amin'ireo faritra ao amin'ny clubifone repo ny fametrahana finday ianao, hametrahana azy ho azy avy amin'ny installer nefa tsy mila manao ny dingana fanoloana izany rakitra izany amin'ny SSH
cyberdiego dia hoy izy:
Ataoko ny zava-drehetra fa ny kroll sy ny hafa kosa tsy mametraka azy ireo ...
Mamaly amin'ny cyberdiego
Toa tsy mety ny rohy ao amin'ny Firefox.
Niezaka ny nametraka ilay programa nolazainao tamin'ny Installer aho. Nampidiriko tao amin'ny IPA ny Monkey Ball sy ny Spore fa tsy mametraka azy ireo ... Angamba tsy vaky ireo taloha?
texuas dia hoy izy:
Raha milaza fa misy lesoka 2 na fanesorana farafahakeliny ao amin'ny lesona ary izany dia mba hahafahany miasa dia TSY MAINTSY manana App ara-dalàna apetraka amin'ny finday iphone, tsy mila karamaina io, mendrika izany ho iray amin'ireo afaka, raha tsy manana anao izany, ny mitranga dia rehefa manafatra ny ipas ianao ary manomboka manokatra azy ireo dia mikatona avy hatrany.
Apetrako aminao ny fomba tena hanaovanao azy ireo
Mametaka anao aho tutorial momba ny fomba hanaovana azy amin'ny fampiharana ipa
1-. Sintomy ny fisie "MobileInstallation" nidina (misintona)
1-. Mifandraisa amin'ny iPod / iPhone amin'ny alàlan'ny SSH.
roa-. Mandehana any amin'ny lahatahiry «/System/Library/PrivateFrameworks/MobileInstallation.framework»
3-. Adikao sy soloinay ny fisie izay alaina. Manome 775 ho sandan'ny fahazoan-dàlana izahay.
4-. Mamorona lahatahiry vaovao miaraka amin'ny anarana hoe "Documents" ao anaty reperitoara indray mandeha izahay.
/ tsy miankina / var / Finday
Manome ny 777 ho sandan'ny fahazoan-dàlana amin'ny lahatahiry amin'ny lahatahiry roa izahay.
5-. Mamerina ny Touch izahay
7-. Mba hametrahana ireo rindranasa, ampidininay ny «.ipa», tsindrio indroa ao anatiny izahay, ary ampifanarahinay avy amin'ny iTunes mankany amin'ny iPod / iPhone anay
Ary ankehitriny miaraka amin'ireo rindranasa fampiharana ampidirin'i SSH
2-. Mamorona lahatahiry vaovao miaraka amin'ny anarana hoe "Documents" ao anaty reperitoara indray mandeha izahay.
3-. Misintona ny lalao amin'ny endrika .ipa izahay
4-. Ovainay ny fanitarana rakitra avy amin'ny «.ipa» ho «.zip», sokafy ny fisie, mankanesa any amin'ny folder «Payload» ary zahao ny «.app».
5-. Unzip ny folder "xxx.app"
6-. Mifandray amin'ny iPod / iPhone amin'ny alalàn'ny SSH izahay, dia adikao ny lahatahiry «xxx.app» ao amin'ny lahatahiry / Applications ary omena azy 775 ho sandan'ny fahazoan-dàlana
7-. Mamerina na mamerina ny Touch izahay
Fanamarihana: tsy afaka mametraka apetraka mitovy amin'ireo fomba roa ianao, izany hoe raha manana fampiharana .app amin'ny iPod / iPhone ianao ary te hametraka azy io miaraka amin'ny fomba .ipa, hamafa aloha ny .app ary avy eo ampifanaraho ny fampiharana avy amin'ny iTunes.
Tadidio fa alohan'ny hametrahana ny triatra rehetra dia tokony hametraka fampidinana ara-dalàna avy amin'ny AppStore isika, na dia maimaim-poana aza izany, raha tsy avelantsika hanokatra ireo napetrakay isika
Mamaly an'i texuas
Androany_ny_teny dia hoy izy:
Texuas raha namaky ny isa 3 ianao dia ho tsikaritrao
3-hametraka fampiharana maimaimpoana avy amin'ny appstore aloha
Efa namaky ny lesona ve ianao?
ianao dia nanandrana azy, nataoko izany noho ny antony namoahako azy….
Mamaly an'i Hoy_el_iphone
Azafady, azafady fa tsy namaky azy aho, azafady, raha efa nampiasaiko nandritra ny fotoana lava tamin'ny iPhone roa aho ary mety amiko io, tsara kokoa sy mora kokoa ny manao azy ho an'ny Ipa
Na izany na tsy izany, mamorona ny fampirimana Documents ary manome fahazoan-dàlana 777 ho an'ny lahatahiry sy ny atiny rehetra, mbola tsy hitako tao amin'ny lesona io, sa?
mazava ho azy fa manakorontana ny fizotranao hametraka fampiharana amin'ny endrika (app) miaraka amin'ny fizotra hametrahana (ipa) ianao
Tsy haiko izany, fa nametraka fisoratana anarana Ipa aho tamin'io andro io ihany no nivoahany, ary nampiasa ny iPhone aho nanomboka ny 9 septambra 2007, nandalo ireo kinova rehetra, na ahoana na ahoana, I ' nametraka fampianarana roa, ny iray ho an'ny rindranasa Ipa ary ny iray ho an'ny rindranasa apetraka napetrak'i SSH, izaho rehefa nivoaka ny rindranasa vaky voalohany an'ny App Store, satria ny tsirairay dia nampakatra azy ireo tamin'ny SSH ary taty aoriana avy amin'i Ipa, tamin'ny alàlan'ny fampianarana. ny apetako dia ireo ao amin'ny dosie dosie Rosiana ahantona isan'andro ireo rindranasa ary taty aoriana dia nahantona tamin'ny clubiphone sy tranokala hafa izany, tsy izaho no nanao azy na namorona azy manokana, nalaiko tahaka izany koa, ary na dia marina aza fa ny fananana ny rindranasa maimaim-poana RAHA IZAO dia ao amin'ny tutorial-nao, ny folder Documents ary ny fahazoan-dàlana 777 ho an'ny lahatahiry Documents sy ireo rakitra rehetra ao anatiny, TSY ao amin'ny tutorial voalohany ary samy ampakarin'i Ipa sy SSH ny folder dia ilaina. ary koa ny fahazoan-dàlana, milaza fa rahoviana Ny olona sasany dia tsy niasa tamin'ny zava-misy tsotra tsy nanoratra ny folder Documents tamin'ny renivohitra D, na ahoana na ahoana dia averiko ihany, ity ny fomba fanaovana azy sy ny fepetra takiana ary ny fampianarana momba ny fomba fanaovana azy io mandritra ny fotoana lava izay andefasako azy. pejy samihafa, ary zavatra entiko manao zavatra betsaka, ka fantatro tsara ny fomba fiasan'izy io sy ny antony tsy mety amin'ny olona. Na eo aza izany dia mbola mieritreritra ianao fa izaho no very hevitra satria tsy misy…. Te-handray anjara fotsiny aho izay tsy hita ao amin'ny lesona fampianaranao, mba tsy ho lasa adala ny olona, ​​ary satria tsy mamorona ilay fampirimana voalaza izy ireo sy ny hafa dia tsy mety amin'ny rehetra izany, tsotra izany.
Pd, lazao fa ny fisie ilaina na MobileInstallation as a forero voalaza dia efa afaka ampidirina avy any Cydia
roju bacar dia hoy izy:
Salama…. Azafady ny tsy fahalalako fa, ahoana no hanampianao alàlana amin'ny fisie?, Sy ny zavatra hafa rehetra efa nataoko saingy tsy vitako ny nanao izany alàlana amin'ny fisie, raha misy miteny ahy dia ho feno fankasitrahana mandrakizay aho…. Tsy mifandray amin'i SSH aho dia mampiasa ilay iFunbox ... SALU2
Valiny amin'ny roju bacar
vai6 dia hoy izy:
Ity lesona ity ve dia sive hametraka amin'ny kinova 2.1 an'ny ipod touch 1 G? Mila ny fametrahana finday 2.1 fotsiny ve aho?
Valiny amin'ny vai6
panther dia hoy izy:
Manana olana aho¨: rehefa soloiko ilay rakitra mobileinstallation izay nakariko rehefa nanangana indray ny iPhone dia mamaivay amin'ny paoma kely aho ary tsy mivoaka avy eo akory !!!!!!! dia mila miova amin'ilay rakitra efa ananako aho ... ny telefaona sy ny any raha mamaly izany
Mamaly an'i panther
Ny marina dia tuto mahatalanjona izy, niasa tanteraka tamiko. Ho an'ireo izay manana olana dia ilaina ny mamerina ny ipod / iphone aorian'ny fanovana ny fampirimana finday ary manana fampiharana ara-dalàna avy amin'ny appstore napetraka ao amin'ny iphone / ipod. Raha tsy manao an'io izy ireo dia tsy hampifanarahana ireo rindranasa vaky izay alaina.
kiko dia hoy izy:
Salama tsara, zazavavikely aho amin'ity fa rehefa vitako ny dingana rehetra napetraka dia natomboko indray ny iPhone ary nanjary mainty niaraka tamin'ny paoma ny efijery, maninona izany, tsy afaka mahita na inona na inona aho, raha tsy rehefa mifandray aho amin'ny pc raha mahita ny zavatra rehetra fa tsy amin'ny iphone, uffff, ampio aho misaotra betsaka
Mamaly an'i kiko
chrono_x dia hoy izy:
Izaho efa nametraka ny zava-drehetra ary izany fa manana fanontaniana aho
Ireo fampiharana dia azo havaozina toy ny hafa sa ilaina fanavaozana azy ireo amin'ny alàlan'ny fametrahana ireo kinova vaovao ????
Mamaly amin'ny chrono_x
Te hahafantatra izany koa aho
raha havaozina ny fampiharana,
Salama daholo, tsy raharahako ny olana iPhone marobe ary noho izany mangataka ny fiaraha-miasa aminareo hanazava amin'ny antsipiriany aho, raha azo atao, ny fomba hampiasana ny iPhone-ko kinova 2.2 (5G77) hampiasa azy io ho modem an'ny PC-ko izay miasa amin'ny windows xp.
Ho an'ny fiheverana dia misaotra betsaka.
robert2870f dia hoy izy:
Manana olana amin'ny fametrahana ny cracker aho, manaraka ny fomba rehetra aho ary tsy mivoaka izany. Hitantana, hamoaka loharano, hanova, hanampy, handefa aho, mangataka amiko hiditra amin'ny Cydia / apt url, any aho no manoratra Hockulo.us, mandefa souce, rehefa milaza amiko izy fa hikaroka amin'ny fitaovana tsy hitako ilay 2 programa izay angatahiny ary avy eo tsy azoko apetraka, MBA misy manampy ahy, te-hametraka ireo programa itune maimaim-poana aho, vaky.
Mamaly an'i robert2870f
Alexmamey dia hoy izy:
Tsy dia fantatro loatra ny momba anao fa jaildreame azy fotsiny aho ary avy amin'ny cydia download mobileinstalacion sy ssh nefa tsy manao na inona na inona eo ambanin'ny programa fotsiny amin'ny Internet. Ary avy eo natokako tany iTunes izy io ary raha izany rehefa avy nisintona fampiharana maimaimpoana avy amin'ny iTunes aho ary tsy nametraka alalana ipod dia mety amiko izany na alaiko avy amin'ny hakolus
Valiny tamin'i Alexmamey
Michigan89 dia hoy izy:
Eny, ampidiniko ilay rindranasa, apetrako amin'ny iTunes, ampifanaraho ary handeha aho, ary ny fanontaniako dia hoe raha mandeha ity sa manao zavatra tsy mety?
Mamaly an'i michigan89
Wade dia hoy izy:
Fa misy inona ny namana. Nandeha namaky ny forum rehetra aho ary tsy hitako ny zavatra ataoko na miresaka momba ny rohy iray hampidinana ny mobille intallation 3.0 ho an'ny ipas dia ilay kinova firmware. Raha misy aminareo manangona, dia tiako izany.
Mamaly an'i Wade
vtorres dia hoy izy:
fanontaniana kely eo ambanin'ireo rindrambaiko vaky saingy midina anaty rakitra maro izy ireo ary tsy hitako ny fomba hamaliana ilay app azafady
Mamaly an'i vtorres
Jr spano dia hoy izy:
Salama hariva manana 3GS sy Jailbreak aho ary mamoha fa apetrako ny xSellize ary tsy azoko atao ny mampifandray ireo ipas hacked fantatrao ve ny antony tsy mandeha ???
Valiny tamin'i Jr Spano
strat dia hoy izy:
Salama, manana iPhone voahidy izay novidiko tany Movistar Chile. Te hanokatra azy aho hahafahako mametraka rindrambaiko nefa tsy mila mividy azy ireo amin'ny iStore. Azoko atao ve ny mamaky azy io ary manidy azy indray amin'ny manaraka? (ohatra, manavao azy). Te hahafantatra aho raha azo mihidy indray ka raha mila hitondra azy any amin'ny serivisy teknika aho dia tsy misy olana amin'ny fiantohana. Misy vokany ve?
Mamaly an'i strat
Raha azonao atao ... azonao atao ny mamoha azy amin'ny redsn0w izao ary rehefa te-hanakana azy ianao dia averinao amin'ny alalàn'ny iTunes tahaka ny efa fanaonao hatrizay ... etsy andaniny (fantatro fa hitako tany ho any izy io, izaho aza tadidinao fotsiny hoe aiza no tena izy) dia ao anaty fampirimana iray amin'ny iPhone ny fampahalalana rehetra momba ny fampiasana azy, ny fampiharana apetraka sns dia voatahiry, mankany amin'ilay fampirimana x ssh ianao alohan'ny hamerenana azy io ary hofafanao ny atiny rehetra ary avereno avy eo izany ...
PS: Manantena aho fa misy olona mahita ity forum ity hanome anao izany adiresy izany ...
Misaotra betsaka, antenaiko ny hahita raha misy olon-kafa mameno an'i Jr Spano!
vt dia hoy izy:
manahoana raha mahita raha misy afaka manazava amiko ny fomba fametrahana ny fisie amin'ny iPod touch satria ambanin'ny fampiharana na lalao sy midina amin'ny fisie maro raha afaka mamaly ny mailakao aho azafady tena misaotra anao pejy bna
Mamaly an'i vt
ANDININ- dia hoy izy:
Misy mahalala ny famerenana amin'ny laoniny ny iPhone raha tsy mandeha ny fametrahana finday ary mihidy ny efijery an-trano? Tsy afaka miditra amin'ny fisie intsony aho handika ny fisie original.
Valio amin'i KEY
epmurcia dia hoy izy:
Salama, mila fanampiana aho. Manana cydia amin'ny iphone 3g s aho fa tsy afaka mametraka rindranasa vaky. Azafady mba andefasanao rohy aho hijery ny fomba nanaovana azy? Sa tsy afaka apetraka amin'ny iphone 3g s vaovao?
Mamaly an'i epmurcia
jereo ity rohy ity ...
mila manao izay voalaza ao amin'ny fomba faharoa ...
raha manana cydia ao amin'ny 3gs ianao dia efa namoaka azy saingy nampitainao taminy ny ultrasn0w hamoahana ilay puce ??? ao no ahitanao ny zava-drehetra ...
Paulo dia hoy izy:
Salama, ahoana no ahafahako mametraka programa mitovy amin'izany na ny afobe izay manokatra sarimihetsika amin'ny onjampeo ary toa computer daholo ny zava-drehetra satria maloto ao anaty finday ny safari
Mamaly an'i paulo
Salama namana hitako ny talenta lehibe an'ity iphone ity. Vaovao aho. Miandry olona hahazo valiny hanampy ahy aho ... nahazo iPhone aho ary nahita namana namaha azy, novahany ary nametraka cydia sy programa hafa tena tsara izy, ny tena izy dia tsy marina na raha tsy azoko ny lalàna sy eo anatrehan'Andriamanitra satria vaky ny programa sasany ary tsy fantatro raha afaka manana olana amin'ny paoma aho na zavatra toa izany. Nilaza tamiko ny namako fa tsy misy ny olana raha toa ka tsy manao tombony ireo mampiasa azy io amin'ny Internet na ireo mampiasa azy. Azafady, raha tsy marina dia farito ny vahaolana ...
Vaovao aho ary nolazain'izy ireo tamiko fa tsy mandeha ny fampiharana cidia, tena marina ve izany
Wesk dia hoy izy:
K andro tsara toy izao. Te hahafantatra fotsiny aho raha misy ny olana raha mamafa ny rindranasa amin'ny format .ipa avy amin'ny folder izay itehirizako azy ireo amin'ny fotoana fisintomana azy ireo, manontany tena aho xk fa tsikaritro fa ny fotoana dk dia ampifanarahina amin'ny iTunes izy ireo. dia voatahiry ao anaty fampirimana hafa izay misy ireo ara-dalàna. Te hahafantatra an'ity xk ity aho satria efa mihoatra ny 3 Gb laniko amin'ireto rindrambaiko .ipa voaviravira ireto no tiako hamafana azy ireo amin'ny PC mba tsy hananana kopia. Raha misy olona afaka manome ahy ny fampahalalana na rohy iray izay isehoany, dia tena tiako izany. Misaotra !!
Valiny tamin'i Wesk
Misaotra anao ary miarahaba anao tamin'ny forum nataonao, tena tsara izany ary manome fanomezana be dia be ianao.
arnool dia hoy izy:
favorsote ny fomba fanaovana azy amin'ny firmware 2.2! ampio aho! ° mivoaka tsara!
Mamaly an'i arnool
Ahoana no hametrahako zavatra amin'ny iphone mini? anttony97@hotmail.com mba ampio
Valiny amin'ny antony
tautacosta dia hoy izy:
Salama, te hahafantatra aho raha azo apetraka amin'ny iPhone 3GS ireo rindranasa vaky ireo fa tsy nigadra izany aho na tsy maintsy mamoha azy io aloha. MISAOTRA
Valio amin'i tautacosta
he, ry rahalahiko, azafady fa somary vaovao aho amin'ny iphone tiako apetraka .ipa fampiharana ao aminy fa eo an-tampony dia miteny aminay ianao mba hampidina ilay "MobileInstallation" (Download) nasiana paty (ny fanontaniako) ny fanontaniako dia avy aiza no ahafahako maka azy? Azafady mba valio aho, avelako ny mailaka anao sao mamaly ianao, misaotra
Mila fampiharana vita sonia amin'ny iPhone 5 aho, andefaso izy ireo azafady
Valiny tamin'i Brayan
Ireo mpamaky RSS tsara indrindra ho an'ny iPhone sy iPad